हाम्रो वेबसाइटमा अर्डरको लागि भुक्तानी कसरी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्थानान्तरण एस - HGH बैंकॉक द्वारा
अर्को देशमा पैसा पठाउन, तपाईंको बैंक खाता ("इन्टरनेट बैंकिंग", "अनलाइन ग्राहक") लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणको कोटीमा लगईन गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रापकको बारेमा आवश्यक जानकारी भर्दै, तपाईं सजिलैसँग विदेशमा पैसा पठाउन सक्षम हुनुहुनेछ। प्राप्तकर्ताको खर्च।
तपाईंको देशको कुनै बैंकले SWIFT स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। बैंकमा व्यक्तिगत भ्रमण गर्नुहोस् र लेनदेन गर्न तपाईंको इरादा बताउनुहोस् र बैंक कर्मचारीलाई सिधै प्राप्तकर्ताको बारेमा बैंक जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। बैंक कर्मचारीहरूले सबै तपाईंको लागि बनाउँदछन् र पूरा गर्छन्, लेनदेन प्रक्रिया १ 15 मिनेट भन्दा बढि लिदैन।
विदेशमा पैसा हस्तान्तरण गर्न ग्राहकले पूर्ण SWIFT विवरणहरू शारीरिक वा कानूनी व्यक्तिहरू थाहा पाउनु पर्छ, जुन स्थानान्तरण पठाइनेछ।
यसमा दायर गरिएको: भुक्तानी
अघिल्लो लेखमा क्रेडिट कार्डको साथ HGH को बिटकोइन्स भुक्तानी गर्दै - बिना बिटकोइन वालेट (सबै भन्दा तेज 5-10 मिनेट)
अर्को लेखमा सदस्यताबाट HGH भुक्तान गर्नुहोस्। यो कसरी काम गर्दछ?
डा। मारियो - अक्टोबर 18, 2019
पहिलो, धोखाधडीको डर छ
उनीहरूले पैसा प्राप्त गरे पछि, DHL ट्र्याकिंग एकै दिन भयो!
3 दिनमा इटाली पठाइएको थियो